Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Entertainment » Galmada Bilaashka ah iyo Safarrada Magaalada
Jebinta Wararka Safarka • kariska • dhaqanka • Entertainment • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • Wararka Raaxada • News • Aroosyada Jaceylka Malabka • Shopping • Dalxiiska • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka Mareykanka
Sug. Miyay taasi ahayd inay akhrido Galmada Bilaashka ah ee Socdaallada Magaalada? Miyaanay taasi naxwe ahaan sax ahayn? Runtii way ahaan doontaa, laakiin waxay khalad uun u noqon doontaa socdaallada aan doonaynno inaan sahamino. Waxaan rabnaa inaan booqano Galmada IYO meelaha Magaalada.
Yaa aan xusuusanayn guriga Carrie oo leh armaajadiisa xiisaha leh?
Ama dukaanka kabaha Manolo Blahniks oo indhaheeda qabtay in ka badan hal mar iyada oo socota oo hadlaysa. Xusuusnow xariiqdaas caanka ah, “Hello, lover” markii aysan ka hadlin nin?
Ka dibna waxaa jira Degmadda Meatpacking halkaas oo Samantha ay gasho tiif leh 3 transvestites.
Taageerayaasha adag ee showga TV -ga "Jinsiga iyo Magaalada," waxaa jira xusuus aad u badan oo ku wareegsan Magaalada New York halkaas oo sheekadu ka dhacayso jilayaasha ugu waaweyn Carrie, Samantha, Miranda, iyo Charlotte. Laga soo bilaabo meesha ay jecel yihiin si ay ugu kulmaan cunto iyo wehelnimo, ilaa waddada orodka ee Charlotte ee Jacqueline Kennedy Onassis Reservoir, ilaa baarka Steve ee uu ugu magac daray eeygiisa, ilaa meelo aad u badan oo ay ku kulmeen cabitaannada, NYC waa Sex iyo City ee hotbed, ciqaab looma jeedin.
Waa hubaal, waxaad ku bixin kartaa galmo iyo dalxiisyada Magaalada - tusaale ahaan bas, laakiin maxaad u baari weyday waqtigaaga adiga oo leh qolooyinkaaga safaro is-hagitaan oo lacag la'aan ah?
Waa kuwan qaar ka mid ah meelaha caanka ah ee laga arkay showga TV-ga oo laga yaabo inaad rabto inaad u istaagto qaniinyo, cabitaan, ama fiiriso.
Carrie waxay dhaaftay dukaankii kabaha Manolo Blahnik in ka badan hal mar dhammaan taxanaha showga TV -ga. Hal goob gaar ahaan waa marka ay ogaato inay $ 40,000 ku bixisay kabo kaligeed - lacag ay u baahnayd hadda si ay ugu iibsato gurigeeda.
Xusuusnow markii Carrie iyo Mr. Big ku dhaceen biyaha makhaayaddan Central Park? Way kala tageen laakiin waxay go'aansadeen inay kulmaan qado si ay ula qabsadaan. Ka dib markii Miranda ay uga digtay inay ku fiicnayd inay dhunkato, markii Mr. Big ku tiirsanaa taas oo keliya, Carrie ayaa dib u soo ceshatay oo ku soo degtay biyaha.
Makhaayadda Da Marino at 220 W 49th Street
Isagoo ka hadlaya Carrie iyo Big iyo makhaayadaha, ka waran Da Marino marka ay mar kale dib isugu soo noqdaan iyo markay ku cashaynayaan Maqaayad Talyaani ah oo raaxo leh, halkaas oo Carrie ku barto inuu joogto u yahay maadaama milkiiluhu u imanayo si uu u salaamo. Waxay markaa ku serenged by Big sida uu ku heesayo "Markii aan ahaa toddoba iyo toban," iyo Carrie ku dhowaad candhuufay khamri iyada.
Majaajilada St. Mark ee 11th Street
Hagaag aan ka fogaanno Carrie iyo Big in yar oo aan dib ugu laabanno St Mark's Comics store. Tani waa halka ay kula kulantay Wade - oo ah nin dhallinyaro ah oo aan daryeel ku lahayn adduunka (oo weli la nool waalidkiis) aad ayay Carrie ula yaabtay ka dib markii hooyadiis soo gashay markii ay labadooduba aad ugu sarreeyeen xashiishka oo uu ku eedeeyey cawska Carrie. Waxay la socotaa oo waxay qaadataa cawska iyada oo u horseedaysa muuqaal kale oo qosol leh oo ku yaal guriga Carrie markii ay la wadaagto Samantha, Charlotte, iyo Miranda, iyo markii ka dib markii loo xiray inay sigaar ku cabtay meel fagaare ah, Carrie ayaa si farxad leh ugu dhawaaqday maalinta markii loo xiray cabista doobie.
Foornada Magnolia 401 Bleecker Street
Tani ma noqon karto goob xusuus leh oo ah Carrie iyo Miranda oo wadaagaya cupcakes -ka marka ay ka wada xaajoodaan cilaaqaadka, laakiin roodhidan ayaa caan ku noqotay adduunka sababta oo ah cunto fudud oo la wadaago. Oo waxaan ula jeedaa yaa u baahnayn sabab uu ku joojiyo roodhida si uu u daweeyo?
Laabta Raaxada at 156th iyo 7th Avenue S
Kaas oo noo horseedaya daweyntii qabsatay Charlotte in faragalin lagu sameeyo dhacdadii gariirkeedii Bakaylaha, oo ay ka soo iibsatay dukaankan yar ee sexy ah, ayaa lala wareegay si ay ugu noqoto nolol maalmeedka caadiga ah oo ay u hesho sababaha ay gurigeeda mar labaad uga baxdo.
Beerta Suuqa Jefferson inta u dhaxaysa 6th Avenue iyo W 10th Street
U socoshada waxyaabo aad u sarreeya, ka waran beertan quruxda badan ee bulshada ee Miranda iyo Steve go'aansadaan inay is guursadaan? Waxay go'aansatay inay hesho meel "aan xanuunsanayn," waxayna samaysay markii boorsadeeda raashinka ay ku jabtay midigta irdaha beerta. Calaamad hubaal ah waxaan dhihi karnaa meeshu waa meeshii.
Kim Cattrall, Cynthia Nixon, Kristin Davis iyo Sarah Jessica Parker (Sawirka Bill Davila/FilmMagic)
Hotel Plaza at 5th Avenue iyo 59th Street
Runtii, safar kasta oo aad ku tagto NYC waa inay ku jirtaa ugu yaraan socod-baradka hudheelka The Plaza Hotel, miyaanay ahayn? Haa, sidoo kale, waxaa jiray goob halkaan ah, markii Carrie ay la hadashay Big ka dib xafladdii ka -qeybgalka Natasha - oo ay ugu yeertay sawirka ul oo aan naf lahayn. Muuqaalkan ayay dib ugu dhaqan gelisay qayb ka mid ah filimkii “Sidii Aynu Ahayn”, markii ay timaheeda ku cadayd Big timaha oo ay ku tiri, “Gabadhaadu waa qurxoon tahay, Hubble.”
Oo waxaa jira meelo kale oo badan oo la sahamin karo - The Samovar -ka Ruushka oo ku yaal 256 W 52nd Avenue halkaas oo Carrie ay taariikhdeeda ugu horraysa la leedahay “Ruushka,” oo uu ciyaaray Mikhail Barishnykov, iyo Columbus Circle Fountain oo ku yaal 59th Street iyo 8th Avenue halkaas oo Carrie ku jabto Aidan qalbigiisa mar labaad iyo wanaag.
Markaa waxaa jira Maktabadda Dadweynaha Magaalada New York Laanta Weyn ee 5th Avenue iyo 42nd Street halkaas oo Carrie iyo Big loo malaynayo inay isguursadaan (ereyada muhiimka ah ayaa loo malaynayaa). Dhismaha Carrie iyo Big ay ka helaan gurigooda NYC ee ay u maleeyeen (waxaa jira erayadaas mar kale) oo ku nool arooska kadib 1010 Fifth Avenue. Oh maya, sug. Taasi waa mid ka mid ah filimada ka dib bandhigga TV -ga. Laakiin taasi waa liis baaldi kale oo ah meelaha loo dalxiis tago.